Home Wararka Markab Ganacsato Soomaaliyeed u siday badeeco oo la goostay shixnaddii uu...
Markab Ganacsato Soomaaliyeed u siday badeeco [$5 Milyan] oo la goostay shixnaddii uu siday
Sida ay sheegyaan wararka naga soo gaaraya magalaada Berbera, Markab u rarnaa Ganacsato Soomaaliyeed isla-markaana muddooyinkii u dambeeyay ku xirnaa Dekedda Magaalada Berbera, ayaa halkaa dib uga goostay isagoon badeecadii laga rogin. Warar ayaa intaas ku daraya in Markabku ka goostay Dekedda Berbera, ka dib markii ay is khilaafeen Ninkii Wakiilka u ahaa, kaasi oo deggan dalka Imaaraadka Carabta.
Sida ay noo xaqiijiyeen qaar kamida ganacsatada badeecada lagala goostay, Illaa hadda lama oga meel uu jaan iyo Cidhib dhigay Markabkan oo Ganacsatada Somaliland u siday Alaab lagu Qiyaasay illaa 5 Milyan oo Dollarka Maraykanka. Warar kala ayaa sheegay in Ganacsatadu ku mashquulsan yihiin inay meel ku ogaadaan Markabkii alaabta u siday, balse illlaa hadda lama oga halka uu ku sugan yahay Markabkaasi. Xilliga Markabku Alaabta la goostay, ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Maalmo ka hadheen Ciidda Carafo.
Previous articleDhaca iyo boobka hantida ayaa ku sii faafaya qaybo kamida dalka Koonfur Afrika
Next articleU.S. Slows Anti-Terrorist Campaign in Somalia as It Considers New Policy
Puntland oo Culimada ugu baaqday in ay faraha kala baxaan arrimaha...
(Deg Deg) Dhaqanka iyo waxgaradka Gobolka Banaadir oo soo saaray warsaxaafadeed...